Minisitry ny Varotra : hatao laharam-pahamehana ny PPN | NewsMada
Minisitry ny Varotra : hatao laharam-pahamehana ny PPN
Vita, omaly, ny famindram-pahefana teo amin’ny minisitry ny Varotra sy ny fanjifana vaovao, Nourdine Chabani sy ny teo aloha, Tazafy Armand, ity farany nifamadika lasa minisitry ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina indray. Tsotra ny nambaran’ny minisitra Tazafy Armand, ny fanatsarana hatrany ny vokatra, maro ny vita fa betsaka koa ny asa miandry.
Ho an’ny minisitra Nourdine Chabani, hataony laharam-pahamehana ny zavatra ilaina andavanandro (PPN), indrindra ny vary, ny lafarinina, ny menaka, ny siramamy, mba ho tombontsoan’ny Malagasy rehetra.
Notsindriny manokana koa ny handraisana fepetra manokana mikasika ny fifaninanana tsy ara-drariny, ny fanajana ny fenitra sy ny kalitao, ny fametrahana ny lanjan’i Madagasikara eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Mila mampiseho ny maha matihanina ny orinasa eto an-toerana raha tiana ny hanondrana entana any ivelany.
Nambarany koa fa tokony hatsaraina ny varotra misehatra amin’ny tolotrasa na servisy entina hampitomboana ny vola vahiny miditra. Voakasik’izany ny lafiny fitaterana, ny fifandraisan-davitra, ny varotra amin’ny internet. Eo koa ny fidiran’i Madagasikara ao anatin’ny tsenam-paritra, ny fanatsarana ny sehatra ahafahan’ny orinasa mifaninana, indrindra ny fanondranana entana any ivelany.